Wax Walbo Oo Aad Uga Baahantahay Dibad Baxyada Jabuuti | Xaqiiqonews
Wax Walbo Oo Aad Uga Baahantahay Dibad Baxyada Jabuuti
Dad Careysan ayaa dibad baxyo bilaabay ka dib markii baraha bulshada lagu baahiyey muuqaalka askari Jabuutiyaan oo nolol xumi ay ku heysato mid ka mid ah xabsiyada sirta ah ee Jabuuti ku yaalla.
Askari magaciisu ku sheegay Fu’aad Yuusuf cali oo sida la sheegay ka tirsanaa ciidanka cirka ee JAbuuti ayaa xabsiga dhaxdiisa iska soo duubay Muuqaal uu dadka ku tusinaayo xaaladda murugsan ee xabsiga ka jirta.
Askarigan ayaa ka mid ah Maxaabiista Jabuuti ee u xiran in ay mucaarad ku yihiin Ismaaciil Cumar Geelle.
Yuusuf oo isbarbardhig ku sameeyey nolasha Soomaaliya iyo Tan Jabuuti ayaa muuqaalka dhaxiisa ku yiri “Dadka Muqdisha Jooga ayaa naga nolol Fiican oo marka ay na arkaan in aan xanuunsaneyno noo heysta”.
Sidoo Kale Aqri..Jabuuti Oo Noqtay Casho Fudud!
Ka Dib Markii La baahiyey Muuqaalka Yuusuf, waxaa xigay Muuqaal kale oo xaaskiisa ay iska soo duubtay iyada oo shacabka Jabuuti ka dalbatay “garab”.
Dibad bax Noociisa Kii Ugu Horeeyey
Dadka Muxaafidka Ah ee Jabuuti ayaa hadda u muuqda kuwa ka daalay “Xakun Jaceylka” Geelle, waxaa magaalada Jabuuti ka dhacay isku soo baxyo waaweyn oo looga soo horjeeda Geelle Xaalku hadda Waxa uu u muuqdaa in dadka Jabuuti ay ku heesayaan “gabasha waa nagu ceebee Dadkayagow Guuleysta”.
Mid Ka Mid Ah Dalalka U Qaalisan Afrika !
Jabuuti Waxaa Ka howlgala oo kaliya Hal shirkad oo isgaarsiineed, Shirkadda Djibouti Telecom, taana waa sababta dalka Jabuuti uu u yahay mid ka mid ah dalalka ugu qaalisan xagga lacagaha ku hadalka Taleefoonka.
Drew Binsky , oo ah dhul mara Mareykanka ah, ayaa safarkiisa Jabuuti ku qeexay mid aad u kulul, Drew ayaa sheegay in halkii mar ee Taksi raacay gudaha Jabuuti ay kaga baxday lacag dhan 35 Doolar, isaga Jabuuti ku sifeeyey mid ka mid ah dalalka ugu qaalisan Afrika.
Si Kastaba ha ahaatee, Shacabka Jabuuti ahadda waxaa hortaal labo daran mid dooro, in ay ku samarkaan xakunka Gelle oo ay nabad iyo faqri ku noolaadaan ama in ay kacaan, taasina oo iyadu lafteeda ka howl badan go’aanka hore.